Olee otú Tinye ndepụta okwu ka a Movie
Ịmụ asụsụ mba ọzọ site na-ekiri fim ma ọ bụ animes na mkpa ka ịgbakwunye kwesịrị ekwesị ndepụta okwu? Chọrọ dezie gị onwe gị ndepụta okwu ike ọhụrụ nkiri ma amaghị otú? Ọ bụrụ na nke a bụ gị ikpe, isiokwu a bụ nri maka gị. Nwere a ngwa ngwa-eji kuru ebe a.
Part 1: Olee ịgbakwunye ebudatara ndepụta okwu a nkiri
Part 2: Olee otú tinye ma dezie ndepụta okwu a nkiri
Ọzọkwa ịgụ: Gịnị bụ ndepụta okwu? Hardsub ma ọ bụ softsub?
E nwere ọtụtụ nke software ka jikota ndepụta okwu na vidiyo ọnụ. Ma kwesịrị ịdị, anyị na Wondershare nwere ike ikwu Video Converter Ultimate nke ọ bụghị nanị na-enyere gị ịgbakwunye ndepụta okwu a nkiri faịlụ, ma-enye gị ohere tinye ndepụta okwu ka a video na ọkụ na-DVD nke na-ekiri na TV. Ugbu a na-agbakwụnye sobtaitel na-ere ọkụ DVD na niile-na-otu software, ọ dịghị atọ ọzọ na-ngwaọrụ chọrọ.
Gịnị bụ video na sobtaitel formats akwado?
Video formats: AVI, MP4, MKV, WMV, mpg, MPEG, VOB, Tod, MOD, FLV, na ihe nile mgbe nile video formats.
Mgbe nbudata sobtaitel faịlụ site na Internet, ị nwere ike na-eso ndị mfe nzọụkwụ ịgbakwunye ndepụta okwu a nkiri n'oge na-adịghị na-enweghị ihe ọ bụla hassle.
Nzọụkwụ 1: Mbubata a nkiri na-enweghị sobtaitel
Ẹkedori usoro ihe omume na mbubata nkiri faịlụ site na-adọkpụpụta video ka isi windows, ma ọ bụ site na ịpị "Tinye Files" button ịgbakwunye nkiri faịlụ site na ihe nchọgharị window.
Nzọụkwụ 2: Tinye ndepụta okwu ka Movies
Pịa "Dezie" bọtịnụ na dị video iji bugote video edezi window.
Na-aga "Ndepụta Okwu" taabụ na n'elu na pịa "+" button mbubata mpụga sobtaitel faịlụ (.srt, .ssa, .ass).
Mgbe sobtaitel na n'elu, ị nwere ike ihuchalu ya aka nri preview windows na ndabara ịke. Site ịlele nhọrọ "T", ị nwere ike ịgbanwe sobtaitel ịke site font, agba, size, ọnọdụ, nghọta, wdg
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, pịa "OK" button iji gosi ntọala ma na-emechi edezi window.
Cheta na: I nwekwara ike ịgbakwunye ederede watermark ma ọ bụ oyiyi watermark gị video ke video edezi window.
Nzọụkwụ 3: mmepụta na fim ndị sobtaitel dị ka video ma ọ bụ ọkụ na-DVD
Na isi windows, họrọ chọrọ mmepụta format si mmepụta format ndepụta. Ebe a, ị nwere ike họrọ a video format ma ọ bụ ngwaọrụ format dị ka mmepụta usoro. N'ikpeazụ, pịa "tọghata" ma ọ bụ "Ọkụ" bọtịnụ ede sobtaitel gị nkiri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ na fim ndị sobtaitel ka DVD, na Nzọụkwụ 1, ị kwesịrị ị mbubata faịlụ ke "Ọkụ" interface kama nke "tọghata" interface.
All mere. Na Video Ntụgharị, i nwere ike tinye ndepụta okwu a nkiri maka ịkpọ ma na PC, ngwaọrụ ma ọ bụ TV.
Iji tinye ma dezie ndepụta okwu na gị onwe gị asụsụ a nkiri, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)) bụ oké inyeaka. Nke a na usoro atụmatụ usoro iheomume dabeere video edezi, ma na-enye ọgaranya ego maka ị ịhọrọ site na n'ihu hazie ya. Na ya, ị nwere ike ịmepụta ahaziri ndepụta okwu tinye gị na nkiri nke ga-adọta mmasị onye ọ bụla. N'okpuru ebe m ga-egosi otú ime ya nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Download Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) free ikpe n'okpuru:
Na-esonụ, Windows version ẹka dị ka ihe atụ na-akọwa otú tinye ndepụta okwu a nkiri ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị a Mac njirimara, i nwere ike iji otu nzọụkwụ ma ọ bụ na-ezo aka a zuru ezu ọrụ ndu maka Mac.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị isi iyi videos
Ẹkedori a usoro, wee họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" ike ọhụrụ oru ngo. Mgbe ahụ, pịa "Import" ma ọ bụ ikpuru na dobe gị videos ozugbo na ya bụ isi window.
The kwukwara videos ga-apụta dị thumbnails na onye ọrụ Album. Ị nwere ike okpukpu abụọ pịa a video clip Ka ịhụchalụ na nri ihuenyo window. Mgbe faịlụ niile were were kwajuru, ikpuru na dobe ha ka ha Video usoro iheomume (Ha ga-merged ọnụ n'ime a otu faịlụ).
Nzọụkwụ 2: Embed ndepụta okwu ka video
Gaa na "Text" taabụ n'elu usoro iheomume, ma bulie a template ị na-ahọrọ na-etinye gị video site ikpuru-n-dobe ma ọ bụ nri na ịpị iji họrọ "Mee". Ọ ga-egosi dị ka "T" na akara ngosi na Text usoro iheomume, ị nwere ike ịdọrọ ya gaa n'ebe ọ bụla gị video.
Ugboro abụọ click na "T" icon ka ịnweta edit ebe, mgbe ahụ, chepụta gị onwe odide, ịgbanwe font, agba, ịke, na-aga aga, na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Malite na-ere ọkụ ndepụta okwu gị nkiri
Mgbe ị na-rụchaa ndepụta okwu edezi, nnọọ pịa "Mepụta" zọpụta e kere eke. Na mmepụta window, ị nwere ike họrọ a na-ewu ewu mmepụta usoro dị AVI, MOV, WMV, MP4, bulie a ahazi usoro maka gị kpọmkwem ngwaọrụ, ma ọ bụ gbaa ya ka DVD maka playback na ihe ọ bụla ọkọlọtọ DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV.
Lelee video ndu n'okpuru:
Ndepụta okwu bụ ọzọ nsụgharị nke dialog na fim, TV omume, animes, egwuregwu vidio, wdg, na-emekarị ka e gosiri na ala nke screen.People onye na-apụghị ịghọta kwuru mkparịta ụka ka nwere ike ịmata ihe na-akpọ site-ekiri ihe nkiri ndepụta okwu. Ọ bụ na-ezi ụzọ ịmụta asụsụ mba ọzọ site na-agbakwụnye ndepụta okwu.
E nwere tumadi abụọ na ụdị ndepụta okwu - softsub na hardsub, nke na-ma atụkwasịkwara a nkiri nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide dị iche iche na software.Accordingly, e nwere abụọ ụzọ ịgbakwunye ndepụta okwu ka a fim ma ọ bụ video: hardcode ma ọ bụ softcode. Ihe mbụ ga tinye ndepụta okwu a nkiri na-adịgide adịgide (a na-akpọ hardsub), mgbe nke ikpeazụ (aka softsub) nwere ike Optionally hide ma ọ bụ gosi ona gị mkpa.
Maka agbakwunye softsub, VLC Media Player a oké inyeaka. Mgbe ị wụnye na ẹkedori VLC, dị nnọọ pịa Video> Ndepụta Okwu Track> Ibu Ibu File ịgbakwunye gị ndepụta okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu a nkiri na-adịghị abịa na ndepụta okwu, ị nwere ike na-ezo aka ụzọ kọwara n'elu.
Olee Otú M Pụrụ Dezie My MP4 Na Adobe Premiere?
eHow Video Downloader: Download ọ bụla Videos on eHow na Otu Click
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka a Movie